Usonkontileka Usebenzisa i-Ellicott® Dredge yomsebenzi we-Remote North Australia
Usonkontileka Usebenzisa i-Ellicott® Brand Dredge Yomsebenzi Okude wase-Australia
Source: Imayini Yokwakhiwa Kwezomhlaba Nokwakhiwa
Usonkontileka osebenza e-Australia kanye nosonkontileka owenza umhlaba usebenzisa i-14-inch Ellicott esanda kuthengwa® I-Brand B890 ihlela ukusula iziteshi zokufinyelela zemiphakathi eyiziqhingi eyisithupha ekude eTorres Strait phakathi kweNyakatho Australia neNew Guinea.
IHholo Lokusebenza Ngamahholo Pty. Ltd., enenhloko-dolobha yaseQueensland eSunshine Coast, uthole ithenda yomsebenzi weTorres Strait kuhulumeni wase-Australia.
Inkontileka ifaka phakathi iziteshi ezokwehlisa imigwaqo emikhulu yokungena ukuze kuhlinzeke imiphakathi eyisithupha yesiqhingi iqonde kusuka eCairns esikhundleni sokulayisha imigwaqo emincane futhi ilindele amaza.
Ukusebenza kokusebenza kulesi sifunda kude kwenza ukuthi i-Hallinging ithenge i-12,000-litre ridge barge njengengxenye yokusekela. Isiphelo esingemuva sasihlotshiswe indawo yokuhlala ephathekayo nekhishi. Amapayipi okuntanta namapayipi aphathwa ngemithambo eya phambili. Umvubukuli we-30T Caterpillar, IT18 womsebenzi ophethe amapayipi, i-18-ton rough terrain crane, izimoto ze-4WD, nezinye izinto zithwelwe enkabeni. Isigaxa futhi sasiqhuba umhlangano ophelele, amalitha ezinkulungwane ezinkulungwane kaphethiloli, kanye nomdwebi wamanzi kasawoti.
Lapho befika esiqhingini ngasinye, i-ramp yehlisiwe bese imishini nogesi wepayishwa. Iphothiji yamapayipi iyahlanzwa futhi umugqa we-14-inch uhlanganiswe ndawonye ngesibhamu somoya. Indawo enesibopho nesicupho se-silt senziwa isilungele ukufika kwe-Ellicott® brand dredge nayo edonsa ukusuka esiqeshini kuya esiqhingini, ukuvumela kwesimo sezulu.
Izinga lamanzi omsila ligadwe kusetshenziswa imitha enomswakama, njengoba iziqhingi ziyakwazi ukuncika kwazo embonini yokudoba yasendaweni.
Iziteshi eziyisithupha kuphrojekthi ziyahlukahluka ngobuningi nohlobo lwezinto okufanele zenziwe. Isihlabathi, ubumba, kanye “nokuhlangana” kwamakhorali kuyinsakavukela kulezi ziqhingi zaseNingizimu ezintathu. Isiqhingi saseNyakatho esiseduze neNew Guinea sinodaka lwasolwandle nobumba oluqinile oluphuzi. Amanani avela ku-10,000 cubic metres kuya kuma-cubic metres ayi-60,000 lilinye.
“I-Ellicott® i-brand dredge isebenza kahle ngakho konke ukusika okujikelezayo nesondo lamabhakede kusetshenziswa. Opharetha bethu bahlatshwa umxhwele kakhulu yinqola yokuhamba ye-spud ngokunemba kwayo ekubekeni ubukhosi eziteshini ezingama-40-ububanzi ”, Kusho uBrian Hall, umqondisi weHholo Contracting.
Ibhethri le-11-ithenda lamathenda axhaswe yinjini ye-3306T CAT futhi lifakwe iziqobelo ezimbili ze-hydraulic zokwenza imisebenzi zisebenza ngokudluliselwa kwamafutha kanye nangezinguquko ze-anchor.
Okwezikhala zolwandle, umnsalo wamanga waklanywa futhi wakhiwa eshabhu yenkampani ukuze ingene ngemuva kwenqola yespud endaweni evaliwe. UBrian Hall ubika ukuthi lolu phiko, lapho lufakiwe, kukhishwe ama-spuds kwachanyuselwa amachashazi namafasitela, kuzibonakalisile ngesikhathi kudonswa ulwandle olude ukusuka eBrisbane kuya eTorres Strait.
Ngenxa yokuba kude kwalezi ziqhingi, ukusebenza kuqhutshwa ngokuqhubekayo futhi iqembu liyaphendukiswa kusetshenziswa indiza yenkampani. Imisinga kule ndawo ihamba ifinyelela emahlombe ayisishiyagalombili futhi ingadlala umonakalo ngepayipi nangamahange okusebenza esikebheni somkhumbi. Yize isimo sezulu sidale isikhathi nemishini elahlekile, uBrian Hall ubika ukuthi inkampani isiqede iziqhingi ezintathu kweziyisithupha futhi "ingaphambi kweshadi lebha".
Ishicilelwe kabusha kwi-World Dredging Mining & Construction
Qala Iphrojekthi Yakho Yokukhipha Isiteshi Nge-Ellicott